एपेक्स घोटाला प्रकरणमा ठेकेदार मनोजकुमार भेटवाल पक्राउ
२o७५ असार ३२ सोमबार / Monday, July 16, 2018
२o७५ बैशाख ३ सोमबार
काठमाडौं । एपेक्स बैंकको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला काण्डमा ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार मनोजकुमार भेटवाल पक्राउ परेका छन् ।
भेटवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले सोमबार पक्राउ गरेको हो ।
जलेह्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्सका सञ्चालक उनको कम्पनीले रत्नपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर बनाइरहेको छ । उनले कमसल जग्गा धितो राखेर तत्कालिन एपेक्स विकास बैंकबाट ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैक (एनसिसी)मा मर्जर हुने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सकेपछि उनीहरू मिलेर एपेक्स डेभेलपमेन्ट बैंकका दरबार मार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्ज शाखाहरूबाट अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह भएको थियो। यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा बैकलाई एक अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९ सय ८४ रुपैँया हानी भएको थियो ।
प्रहरीले यसअघि तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
काठमाडौं । एपेक्स बैंकको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला काण्डमा ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार मनोजकुमार भेटवाल पक्राउ परेका छन् । भेटवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले सोमबार पक्राउ गरेको हो । जलेह्वर
एपेक्स घोटाला प्रकरण : राष्ट्रबैंकका कर्मचारी र गभर्नरलाई होला त कारवाही ?
काठमाडौं । पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने उखान यतिखेर तत्कालीन एपेक्सका बैकमा अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद धिताल तथा अन्य सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको पक्राउ प्रकरणसंगै चरितार्थ भएको छ । केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट
एपेक्स घोटाला प्रकरणमा लगानी कोषका बहालवाला कर्मचारी पनि पक्राउ
काठमाडौँ । तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा नागरिक लगानी कोषका बहालवाला कर्मचारी पनि तानिएका छन् । केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) ले एपेक्स बैक घोटाला प्रकरणमा नागरिक लगानी कोषमा कार्यरत छविरमण
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल एक खर्ब ३१ अर्ब खर्च
पाकिस्तानमा शुक्रबार भएको हिंसामा परी मृत्यु हुने संख्या १४९ पुग्यो
माइतिघर लगायतका ठाउलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो, अब कार्यान्वयन नहुने
राष्ट्र बैंक रिपोर्ट : पछिल्लो ११ महिनामा १० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा
डा.गोविन्द केसी गगन थापाका कार्यकर्ता हुन् - नेकपा नेता बडाल
काठमाडौँ महानगरको फोहोर संकलन सुरु, मंगलबारसम्ममा सबै फोहोर उठ्ने
इपिएलमा युएईका कप्तान रोहन मुस्तफा काठमाडौँ किंग्सबाट खेल्ने
चार बलात्कारी रंगेहात पक्राउ
विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनल आज : फ्रान्स र बेल्जियमबीच भिडन्त
फिफाद्वारा इङल्याण्डको फुटबल टिमलाई ७७ लाख ५७ हजार जरिवाना
विश्वकप दोस्रो सेमिफाइनल : इङल्याण्ड र क्रोसियाबीच भिडन्त
साधारण व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ताकत देखाउने बेला भएको छैन – प्रदीप गिरी
रोनाल्डोले किन छोडे रियल म्याड्रिड ? मेसीसँगको द्वन्द सकियो त ?